जवनीको जोस - Movies Trends
१०-१२ बर्ष अगाडीको कुरा हो , धरान , बिराटनगर , ईटहरीतिर त्यति बेला क्याबिन रेष्टुरेण्टहरू त्यति खुलेका थिएनन् । एकदिन मेरो साथी रबिनले मलाई “एकजना मान्छे भेट्नु छ , ईटहरीतिर जाउँ” भन्यो । मेरो पनि काम नभएकोले “हुन्छ” भने र उसको मोटरसाईकलमा बसे र हामी ईटहरीतिर लाग्यौ ।
ईटहरीमा रबिनको मान्छे भेट्यौ र १ घण्टाजति कुराकानी सकेपछि हामि छुट्टियौ । “अलि भोक लागे जस्तो भयो , जाऊँ यसो सेकुवा खान” रबिनले मलाई भन्यो र हामी ईटहरीको पश्चिम बस स्टेण्ड तिर लाग्यौ । त्यँहा लहरै सेकुवा पसल थियो र हामी एउटा पसलमा छिर्यौ । हामीले २ प्लेट सेकुवा र १ क्वाटर जीन मगायौ ।
पसलको साहुनी अलि मोटी र पाको उमेरको थिई । रबिन त पहिला पनि त्यहाँ आई राख्ने रहेछ , साहुनी ले “के छ हालखबर” भनेर सोधी । “सबै ठिकै छ , यसो भोक लागेर आएको नि खाजा खान” साथिले भन्यो । केहि छिन पछि २ प्लेट सेकुवा र जीन बोकेर साहुनी आईन र टेबलमा राखेर गईन । भोक लागेकोले धमाधम सेकुवा र जीन खान थाल्यौ । “केटी चिक्ने हो? ” रबिनले मलाई सोध्यो । म त अकमक्क परे र भने “के भनेको यार ? दिउँसै चिक्ने ? कहाँ छन केटी ?” रबिन हाँस्दै भन्न थाल्यो ” तिमी चिक्छु मात्रै भनन , म व्यवस्था गरिदिन्छु ।” मैले “मिल्छ भने चिकौनत” भने ।
अनि साथीले साहुनीलाई बोलाई र भनि “अनि साहुनी , मेरो साथीलाई काँचो मासु पनि खान मन छ रे , यसो व्यवस्था गरिदिनु पर्यो ।” साहुनी हाँस्दै भन्न थाली ” ए हो र ! भई हाल्छ नि । कलिलो मासु खाने कि , छिप्पिएको मासु खाने ?” मैले त कुरै बुझिन र सोधे “के भनेको यार ?” रबिन मुसुक्क हाँस्दै ” बिहा नगरेको केटी चिक्ने कि बिहा गरेको आईमाई चिक्ने? ” भन्यो । मैले पनि लजाई लजाई “कलिलै खाउँ न त त्यसो भए” भने । साहुनीले कुरा बुझिछ र “एकै छिन है” भन्दै बाहिर निस्की ।
करीब १०-१५ मिनेट पछि साहुनी १ जना केटि लिएर भित्र छिरी । “ल यहि बहिनी हो , कुरा मिलाउनु” भन्दै केटीलाई हाम्रो क्याबिनमा छोडेर साहुनी बाहिर लागी । “ल सोल्टिनी , मेरो साथीलाई काँचो मासु खानु मन लाग्यो रे , के कति हो दाम मिलाउ ।” रबिनले भन्यो । “मलाई ५०० दिनु र लजको २५० लाग्छ , हुन्छ ?” केटीले भनि । “मेरो साथीको FIRST TIME हो क्या , एकै छिन मा झारिहाल्छ होला, ५०० सय अलि धेरै भयो ३०० मा हुन्छ ?” रबिनले भन्यो । केटीले मलाई हेरी र भनि “त्यसो हो भने ४०० दिनु नि त ।” मोलतोल हुँदा ३५० मा कुरा मिल्यो र केटी मेरो छेउमा बसि ।
ओहो , केटीले जीन र चुरोट खाएको देखेर त म हैरान भए । लाग्थ्यो कि उनी रक्सी र चुरोट निकै खान्थी । करीब १५ मिनेट जति खाई सकेपछि , केटी मेरो काखमा आएर बसी र भनि ” दाई त निकै हेण्डसम हुनु हुँदो रहेछ , नाम के हो तपाईको ?” मैले “मेरो नाम ललित हो , तिम्रो नाम के हो नि ?” भने । ” उर्मिला” भनिन । मेरो काखमा बसेकीले मेरो लाँडो पनि ठन्कि सकेको थियो , उनले थाहा पाईछन र भनि “ओहो , दाईको माल त निकै ठुलो जस्तो छ नि , मेरो कण्डोमा घोँच्यो ।” सबैजना गलल हाँस्यौ । “अब जाउँ न त लज तिर , अनि फेरि आएर खाउँला ” भन्दै उर्मिला उठ्न थालि ।
म उर्मिलाको पछि पछि लागे । त्यही सेकुवा पसलको माथि नै लज रहेछ । लजको काउण्टरमा गएर उनले कोठाको चाबि लिई र मैले २५० रूपैया तिरे । मलाई चाबि सँगै काउण्टरको मान्छले एउटा कण्डोम पनि दियो । म त अचम्म परे तैपनि केहि नभए जस्तो गरि कण्डोम गोजिमा हाले र कोठा तिर लागे । कोठा नं. २०४ मा छिर्यौ । कोठा सानो र एउटा मात्रै खाट थियो । “बत्ति बाल्नु र ढोका लक गरिदिनु ल” उर्मिलाले भनि । बत्ति बालेर ढोका बन्द गरेर यसो फर्के को त , उर्मिला सबै कपडा खोलि ओरि नाङ्गै खाटम बसि सकेकी रहिछ ।
मलाई कता कता लाज लाग्यो र उ सँगै छेउमा बसे । “छिटो लुगा खोल्नुहोस न , सेकुवा खान जानु पर्छ क्या ” उर्मिलाले भनि । मैले पनि सबै लुगा खोले र खाटमा बसे । उनलाई नियालेर हेरे , दुधको पोका सानो सानो थियो र पुती वरीपरी भुत्लै भुत्ला । “दाईको लाडो त मजाको रहेछ नि , कत्रो मोटो र ठुलो । बिस्तारै चिक्नु ल , मलाई दुख्छ ।” “हुन्छ” भन्दै म उसको माथि चढे । उसको दुधको पोका माड्दै , चुस्दै मेरो लाडो उसको पुतीको मुख मा लगे । लाडो हातले समातेर पुतीको दुलोमा राखे र बिस्तारै ठेले । “आईय्या दुख्यो , बिस्तारै हाल्नु न ” उर्मिलाले भनि । हुन पनि लाडो छिर्नै सकेको थिएन । एकछिन उनको पुती औलाले खेलाईदिन थाले , उनि ” आहह आहह” गर्न थाली ।
पुतीबाट पानी झरेकोले गर्दा मेरो औलाहरु च्याप च्याप भयो । “अब छिर्छ होला” भने र फेरि लाडो हातले समातेर उर्मिलाको पुतीनिर राखे र ठेले । मेरो लाडो उनको पुतीमा स्वात्तै छिर्यो । “आहहहह” उर्मिला सुस्केरा हाल्न थाली । म बिस्तारै बिस्तारै उनको पुतीमा चिक्न थाले । शुरुमा बिस्तारै चिक्दै गए , केहिछिन मा कस्सी कस्सी चिक्न थाले । उर्मिलालाई पनि मजा आउन थालेछ , उ पनि तलबाट उफ्रिन थाली ।
मलाई च्याप्प समाउँदै , मेरो गालामा चुम्बन गर्दै “अलि भित्र सम्म हाल्नुन , मजा आईरहेको छ । आज धेरै मजा आयो ।” उर्मिला भन्न थाली । मैले पनि मेरो स्पीड बढाए । उनको खुट्टा फारेर मेरो काँधमा राखे र कस्सी कस्सी चिक्न थाले । “आहह उहहहह आहहह उहहह” उर्मिला कराउन थाली । केटीले पनि तलबाट धक्का दिएकोले मलाई पनि चिक्न मजा आईरहेको थियो । पहिलो पल्ट वास्तविक चिकाईको अनुभव मैले गरि रहेको थिए ।
२०-२५ मिनेट जनि चिके पछि मेरो पनि माल झर्न आँट्यो र मैले भने ” उर्मिला मेरो त झर्न लाग्यो ?” “पुती भित्र नझार्नु ल , बाहिर निकालेर झार्नु ” उर्मिलाले भनि , मैले मेरो लाँडो बाहिर निकाले । उनको पेटमा मैले मेरो लाडोबाट सेतो माल झारिदिए । उर्मिला आखा चिम गरेर पल्टिरहेकी थिईन । एकछिन पछि उर्मिला उठिन र म पनि उठे र तन्नाले आफ्नो शरीर सफा गर्न थाली । मैले पनि तन्नालेनै मेरो लाडो सफा गरे र लुगा लाउन थाले ।
उर्मिला पनि लुगा लगाएर तयार भई सकेकी थिईन । “आज धेरै मजा दिनु भयो , फेरि पनि आउनु होस ल । एकदमै रमाईलो गरि चिक्नु भयो तपाईले त । अर्को चोटि २ पल्ट चिक्नु होला, तर पैस २५० मात्रै दिए पुग्छ ।” मैले पनि हुन्छ भने । उर्मिलालाई ३०० रुपैया दिएँ र हामी तल सेकुवा पसल तिर झर्यौ । साथी रबिन एक्लै बसि रहेको थियो । हामी फेरि सँगै बसेर सेकुवा र जीन खान थाल्यौ ।